Taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Realme smartphone' oo leh kamarad 64 MP ah ayaa leh taariikh cusub oo rasmi ah oo la soo saaray | Androidsis
Taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Realme smartphone' oo leh kamarad 64 MP ah ayaa leh taariikh rasmi ah oo la sii daayo
Dhowr maalmood ka hor wixii u muuqday inay yihiin boodhadhka daahfurka Realme taleefankeedii ugu horreeyay ee leh 64-megapixel aaladda dareeraha, oo aan kaliya noqon doonin kii ugu horreeyay ee shirkadda, laakiin kan ugu horreeya adduunka sidoo kale inuu qalabeeyo dhibka kiciyay. Teaser wuxuu xusay taariikhda 8 Ogosto inay tahay maalintii la bilaabay qalabkan, laakiin hadda macluumaadkan waa la beeniyay.
Boorar cusub oo xayeysiis ah ayaa soo muuqday. Tani waxay haysaa ficil ahaan isku mid bilicsanaanta sida tan hore loo sheegay, laakiin waxay wax ka beddeleysaa taariikhda soo-saarista taleefanka dareeraha 64 MP ee soo saaraha, waana ku sharraxnay hoos.
Sida ku cad waxa boodhadhkan hoose aan sudhan nahay uu inoo sheegayaa, aaladda waxaa si rasmi ah loo sameyn doonaa Ogosto 15 ee ma ahan 8 bishaan sidii lagu dhawaaqay. Tani waxay soo jeedinaysaa inay tahay inaan sugno toddobaad ka dheer intii aan filaynay inaan la kulanno, taas oo xoogaa niyad jab ku noqon doonta kuwa samir la'aanta ah ee doonaya inay ogaadaan sida wanaagsan ee qeexitaanka sawirrada lagu qabtay aaladda sawir qaadista ay tahay, taas oo ballanqaadyo badan leh; rajooyinka ku xeeran arrintan aad ayey u sarreeyaan.
Dareenka Samsung GW1 64 megapixel waa midka ka dhigaya joogitaanka garoonka Realme. Kani waa cabbir weyn 1 / 1.72 ”wuxuuna qaadi karaa 64 sawir oo megapixel ah oo xalka ugu badan uu yahay 9,216 x 6,912 pixels. Waxaa ku shaqeeya awoodaha 4-in-1 pixel ee Samsung - oo loo yaqaan 'Tetracell technology' - aaladda 'GW1 sensor' waxay ku soo qaban kartaa 16-megapixel sawirro xaaladaha hooseeya.
Realme waxay dib u xaqiijineysaa inay tahay nooca XNUMXaad ee ugu weyn ee casriga ah ee Hindiya
Aaladda qarsoodiga ah, oo aynaan wali garanayn magaca ay u bixin doonto, waxay ku yeelan doontaa nidaam kamarad afar gees ah dhabarka, sidaan horeyba u shaacinay waqtiyadii lasoo dhaafay. Kicinta koowaad waxay noqon doontaa 64 Xildhibaan, sida lafilayo. Saddexda kale ee wax qabta waxay noqon doonaan muraayadaha xaglaha ballaadhan, dareeraha ToF ama kamarad u heellan qaabka sawirka, iyo muraayadaha indhaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Realme smartphone' oo leh kamarad 64 MP ah ayaa leh taariikh rasmi ah oo la sii daayo
Nubia Z20 waxay ku dhowdahay inay si rasmi ah ula wareegto iyadoo lagu taageerayo 30-watt oo si dhakhso ah loogu soo dallaco
LG waxay soo bandhigaysaa telefoon laba shaashad leh bisha Sebtember